China Wet pasi mica upfu fekitari uye bhizimisi | Huajing
Huajing epurasitiki-giredhi mica upfu, iyo inonyanya kushandiswa kweinjiniya mapurasitiki kuti awedzere kupfugama modulus uye kushanduka. Kuderedza shrinkage.Mumunda wepurasitiki zvishongedzo zvezvigadzirwa zvemagetsi, mushure mekuwedzera mica, vanogona kuve vakanatsiridzwa musanganiswa nedhizaini. inogona kugadzirisa kusagadzikana kwemamiriro ekunze kwezvigadzirwa zvepurasitiki, kuitira kuti mainjiniya epurasitiki agone kutsigira tembiricha yakakura uye misiyano yezvakatipoteredza;
Wet Mica (Inoshanda Chinhu)
Sice Ruvara Kuchena (Lab) Particle Saizi (μm) Kuchena (%) Magnetic Chinyorwa (ppm) Mwando （%） ZVIREVO (650 ℃) Ph Osbestos Heavy Metal Chikamu Bulk denisty (g / cm3)
Wet Mica （Inoshanda Chinyorwa）
W-100 Sirivha Muchena ＞ 82 125 .7 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 AIHWA P 10ppm 0.22
W-200 Sirivha Muchena ＞ 82 70 .7 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 AIHWA P 10ppm 0.19
W-400 Sirivha Muchena ＞ 83 46 .7 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 AIHWA P 10ppm 0.16
W-600 Sirivha Muchena ＞ 86 23 .7 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 AIHWA P 10ppm 0.12
Basa Rakakura raMika
Huajing epurasitiki-giredhi mica upfu, iyo inonyanya kushandiswa kweinjiniya mapurasitiki kuti awedzere kupfugama modulus uye kushanduka. Kuderedza shrinkage.Mumunda wepurasitiki zvishongedzo zvezvigadzirwa zvemagetsi, mushure mekuwedzera mica, vanogona kuve vakanatsiridzwa musanganiswa nedhizaini. inogona kugadzirisa kusagadzikana kwemamiriro ekunze kwezvigadzirwa zvepurasitiki, kuitira kuti mainjiniya epurasitiki agone kutsigira tembiricha yakakura uye misiyano yezvakatipoteredza; inovandudza zvakanyanya kuputira kuti ive nechokwadi chekuvimbika kwemagetsi emagetsi mashandiro; Inogona kusimudzira kuyerera kweimwe chaiyo zvigadzirwa zvepurasitiki zvakare.
Wet pasi mica upfu inoshandiswa kuchenesa mbishi zvinhu nemvura uye nekukuya nemvura sepakati, saka yakanyorova pasi poda ine yakanakisa hunhu pane yakaoma-ivhu hupfu, senge yakachena kuchena, yakatsetseka pamusoro, diki hombe density, akajairika chimiro, hombe dhayamita -to-ukobvu reshiyo uye zvichingodaro.
Kushanda kweMika muHDPE
Kuwedzeredzwa kwe mica kuHDPE kunogona zvakare kudzora kubvumidzwa kwezvinhu, saka zvinokodzera kugadzira mhando dzese dzemidziyo, senge mota yemafuta tangi zvichingodaro. Iyo isiri-ndege shear modulus yeHDPE / mica zvinoumbwa zvinowedzera zvakanyanya nekuwedzera kwechimiro cheiyo mica machira, nepo isiri-ndege shear modulus ichiderera zvishoma. Iwo maHPPE makomputa akazadzwa ne Mica powder ane zvirinani zvakakwana zvemagetsi zvivakwa. Nekuwedzera kwehuwandu hweiyo mica upfu, iyo tensile simba, kukotama simba uye kukotamisa modulus yezvakaumbwa zvinowedzera.
Kushanda kweMika Powder muABS
ABS yave ichishandiswa zvakanyanya mumotokari, kutaurirana, zvemagetsi, kudzivirirwa kwenyika uye mimwe minda. Mushure mekuwedzera mica kuABS mainjiniya epurasitiki, kuomarara, kupfeka kuramba uye kugadzikana kwemakemikari kweABS kunogona kuvandudzwa mumadhigiri akasiyana. Kana 30% mica ikawedzerwa, ichienzaniswa neiyo yakachena ABS, mutengo wekugadzira wakaderedzwa neanenge makumi maviri muzana, uye simba rekukotama uye kusimba kwechinhu chinovandudzwa zvakasiyana. Kana zvirimo zvemica zviri makumi maviri kubva muzana, iyo yekukotamisa modulus yezvinhu yacho ingangoita zvakapetwa kaviri yeiyo yakachena ABS.
Pashure: Chakaita zvokugadzirwa mica upfu
Zvadaro: Yakavharwa mica upfu